Ahoana ny fomba famahanana habaka amin'ny Mac | avy amin'ny mac aho
Satria lasa entam-barotra ny sehatra fitahirizana rahona ilaina ary ampiasain'ny mpampiasa an-tapitrisany, nohamarininay hoe ahoana ny fitohizan'ny mpanamboatra amin'izao fotoana izao manolotra toerana fitahirizana kely dia kely amin'ny ekipany. Na dia manaraka ny lalany amin'ny fomba maro aza i Apple, dia mitazona ny fironana mahazatra amin'ny indostria izany.
Raha mandeha miadana kokoa noho ny mahazatra ny solosainao, dia mety ho noho ny antony roa izany: tsy nandrafitra azy nandritra ny fotoana kelikely ianao ary nametraka ny kinova macOS mifanaraka amin'izany hatramin'ny voalohany, na lany toerana amin'ny kapila mafy. Raha tsy fahampian'ny toerana ny antony dia tonga amin'ny lahatsoratra mety ianao satria amin'ity lahatsoratra ity dia hasehontsika anao ny fomba hanafoanana ny habaka amin'ny Mac.
Indrisy, manafaka toerana amin'ny Mac tsy midika fotsiny hoe mamafa apps izany, fa tafiditra ao anatin'izany ny fijerena hoe ohatrinona ny habaka azon'ny rafitra. macOS, tsy toy ny Windows, dia mitantana ny atiny alaina avy amin'ireo rindranasa apetrakay amin'ny fomba hafa mihitsy.
Raha ny Windows dia mamela ny mpampiasa hisafidy izay lahatahiry hisintonana ny votoaty tadiavintsika, indrindra raha resaka lalao, votoaty fanampiny amin'ny fampiharana iray... amin'ny macOS, ny rafitra no miandraikitra ny fitehirizana azy.
Indrisy anefa fa amin'ny rafitra no ataony, fa tsy amin'ny toerana tian'ny mpampiasa hitahirizana azy. Amin'izany fomba izany, rehefa mamafa fampiharana iray isika, tsy mamafa ny atiny rehetra izahay fa mamafa ny fampiharana fotsiny. Hijanona ao amin'ny rafitra ny atiny fanampiny rehetra azonay sintonina.
Ohatra, bokotra. Ao amin'ny sary etsy ambony dia azonao jerena ny fomba fiasan'ny fizarana System an'ny Mac-ko, nibodo 140 GB, toerana izay azoko nahena ho 20 GB fotsiny, haben'ny habaka mihoatra noho izay mifanaraka amin'ny zava-misy.
Tsy ny rindranasa rehetra apetrakay amin'ny solosainay no misintona votoaty fanampiny voatahiry ao amin'ny rafitra, ka ny zavatra voalohany hataonay mba hanafaka toerana amin'ny Mac dia esory ny apps tsy ampiasainay intsony.
1 Ahoana ny fanesorana apps amin'ny Mac
1.3 Fomba 3
1.4 Fomba 4
2 Ahoana ny fomba hampihenana ny haben'ny rafitra amin'ny macOS
Ahoana ny fanesorana apps amin'ny Mac
Raha te hanamarina ny haben'ny habaka na ny rindranasa sy ny macOS ary ny rafitra ao amin'ny Mac, dia tsy maintsy tsindrio eo amin'ny paoma izay aseho eo amin'ny menio ambony (tsy maninona izay fampiharana nosokafanay satria aseho ity menu ity na inona na inona fampiharana nosokafanay).
Manaraka, ndao hipaoka Momba an'ity Mac ity ary ny sary ambony dia haseho. Raha te hidirana amin'ny antsipirihan'ny rindranasa rehetra sy hijerena hoe ohatrinona ny habaka ipetrahan'ny tsirairay, tsindrio eo mitantana.
Avy eo, ny macOS dia hampiseho antsika varavarankely iray ahafahantsika mahita, amin'ny fomba rava, ohatrinona ny toerana misy azy:
ny fampiharana izay napetrakay.
ny antontan-taratasy izay notehirizinay tao amin'ny solosaina.
Ny habaka misy ny dika mitovy amin'ny sary izay ananantsika ao amin'ny fampiharana Sary raha mampiasa iCloud isika na ny sary rehetra raha tsy mampiasa iCloud isika fa mampiasa ny app Photos hitantana sary.
Ny habaka ipetrahan'ny rakitra alaina ao amin'ny solosainay izay ihany koa azo alaina ao amin'ny iCloud.
Ny toerana misy ny fampiharana mailaka Mail.
Ny habaka ipetrahan'ny fampiharana Lahatsoratra
Ny haben'ny rakitra rehetra izay ao amin'ny Kitapetaka.
Raha mila vonoy ireo rindranasa napetraka ao amin'ny Macy Mba hanafaka ny habaka dia manana fomba 4 izahay:
Avy amin'ny fizarana misy ny habaka ipetrahan'ny fampiharana tsirairay dia tsy maintsy tsindrio eo amin'ny fampiharana izay tiantsika hofafana dia tsindrio eo esory.
Amin'ny alalan'ity fomba ity dia afaka manala ny fampiharana rehetra napetrakay amin'ny solosainay, na avy amin'ny Mac App Store izany na tsia, raha mbola TSY fampiharana rafitra izy ireo.
Sokafy ny Finder, tsindrio ny fampiharana izay tiantsika hofoanana ary taritsika mankany amin'ny Fako isika.
Sokafy ny Application Launcher, tsindrio ary mihazona ny bokotra havian'ny totozy misintona ny fampiharana mankany amin'ny fako.
Ity fomba ity dia manan-kery raha toa ka fampiharana izay napetrakay avy amin'ny fivarotana fampiharana Apple ofisialy, izany dia avy amin'ny Mac App Store.
Manokatra ny Application Launcher izahay ary mihazona ny bokotra havian'ny totozy amin'ny fampiharana rehetra mandra-panombohany bailar y asehoy X eo amin'ny zoro ambony havia amin'ny kisary.
Raha hamafa fampiharana amin'ity fomba ity, raha vao manomboka mandihy ny fampiharana, tsindrio ny X aseho eo an-tampon'ny havia amin'ny kisary.
Ahoana ny fomba hampihenana ny haben'ny rafitra amin'ny macOS
Raha tsy afaka manafaka toerana bebe kokoa amin'ny kapila mafy izahay satria hita ao ny olana ny haben'ny fizarana System, tsy maintsy misafidy ny hampiasa rindranasa an'ny antoko fahatelo isika, satria Apple, teratany, dia tsy manolotra antsika fampiharana afaka manafoana io habaka io.
Mba hampiasana ireo fampiharana ireo dia ilaina izany manana fahaizana informatika kely indrindra, satria hiditra ao amin'ny rafitra isika mba hamafa izay rehetra fantatsika, izay azontsika fafana tsy misy fiantraikany amin'ny fahombiazan'ny ordinatera sy ny fahamarinan-toerana.
Raha tsy manana izany fahalalana izany ianao, ny fomba mety indrindra hanafahana ny habaka rafitra izay ipetrahan'ny macOS dia ny fandrafetana sy fametrahana indray ny rindranasa rehetra apetrakay matetika. Ity dingana ity dia haingana sy mora kokoa noho izay azonao eritreretina.
Disk Inventory X dia fampiharana maimaim-poana tanteraka izay ahafahantsika manadihady ao anatin'ny rafitra asehoy anay ny habaka ipetrahan'ny tsirairay amin'ireo rakitra sy lahatahiry izay ananantsika ao amin'ny solosintsika mba ho afaka hamantatra, ohatra, ny votoatin'ny rindranasa izay tsy napetraka intsony ao amin'ny solosainantsika.
Ny interface interface tsy tena tsotra, fa raha manokana fotoana kely amin'izany isika dia ho afaka hanararaotra tanteraka izany ka ho afaka hanafoana ny votoaty rehetra izay heverin'i Apple ho System, fa izany no tena votoatin'ny rindranasa izay tsy ampiasainay intsony ary tsy ampiasainay intsony. nesorina tao amin'ny solosainay.
Ny fampiharana Disk Inventory X dia azo alaina ho anao misintona maimaim-poana amin'ny alàlan'ny tranokalany.
DaisyDisk dia fampiharana mahaliana hafa izay ananantsika esory ny habaka izay mibodo ny rafitry ny fitaovantsika. Na dia manolotra antsika interface tsara kokoa aza izy io, dia mitovy ny vokatra, satria, toy ny Disk Inventory, dia ahafahantsika miditra amin'ny lahatahiry rafitra sy mamafa ny atiny rehetra.
DaisyDisk dia vidin'ny 10,99 euro ary azo alaina izany amin'ny alàlan'ny tranokalany. Ho fanampin'izay dia ahafahantsika manandrana ny fampiharana maimaim-poana tanteraka, ka raha tsy mazava tsara amin'ny Disk Inventory X isika dia afaka mahita raha mety tsara kokoa amintsika ity fampiharana ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ahoana ny fomba hanafahana toerana amin'ny Mac
Ny MacBook Pro nanomboka tamin'ny tapaky ny taona 2012 dia efa noheverina ho Vintage an'i Apple